उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाद्वारा ऐलानी जग्गाको विवरण संकलन शुरु -
उदयपुर । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले जिपीएस प्रविधिबाट ऐलानी जग्गाको नाप जाँच कार्य थालनी गरेको छ । नगरपालिका क्षेत्रको ऐलानी जग्गा विवरण संकलन कार्यका लागि मङ्गलबारदेखि नाँपजाँच सुरुवात गरेको हो । नगरपालिकाले औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी वडा नम्बर ६ देखि सो कार्यको शुरुवाती गरेको हो । नाँपचाँच गरी विवरण संकलनपछि चासभोग गर्नेलाई सो जग्गाको स्वमित्व दिने प्रक्रिया थाल्ने जनाएको छ ।
नगरवासीको प्रमुख समस्या, आवश्यकता र चाहना अनुरुप यस्तो कार्य थालनी गरिएको मेयर बलदेव चौधरीले बताए । मेयर चौधरीका अनुसार वडा नं. ६ देखि थालिएको कार्यलाई १६ वटै वडामा विस्तार गरिनेछ । कामको प्रभावकारिता र पारदर्शिताका लागि ऐलानी जग्गाको विवरण संकलन तथा व्यवस्थापन निर्देशन समिति नै बनाइएको छ ।
नगरपालिका क्षेत्रमा करिब ६० प्रतिशत जग्गा ऐलानी, प्रति रहेको जनाउदै ऐलानी जग्गाको विवरण संकलनको उद्देश्यले चासभोगका आधारमा फारम भर्न निवेदन माग यस अघि गरिएकामा करिब १९ हजारले निवेदन दिएको मेयर चौधरीले बताए । जग्गा नापजाँचका लागि आधुनिक मेसिन, टोटल स्टेशन मेसिन प्रयोग गर्ने जनाइएको छ ।
त्यस्ता मेसिन हाल नगरपालिकामा दुईवटा रहेका छन् । भएका दुई मेसिनले वडा नम्बर ६ र वडा नं. १ देखि नाँप जाँचको काम थाल्ने र अन्य थप दुईवटा मेसिन किनेर सबै वडामा तीन महिनाभित्रमा नाँपजाँच गरी ऐलानी जग्गाको विवरण निकाल्ने कार्य गरिने मेयर चौधरीले बताए । विवरण संकलन लगत्तै नगरबासीलाई स्वमित्व दिने काममा नगरपालिका लाग्ने, ढिलोमा डेड बर्षभित्रमा नागरिकलाई स्वमित्व दिने काम पुरा गर्ने मेयर चौधरीले बताए ।